Alahady 16 aogositra 2020 - FJKM Amparibe Famonjena
ALAHADY 16 AOGOSITRA
MAHATOKY HATRAMIN’NY FAHAFATESANA NY MINO
“.Izaho no Mpiandry Tsara..” Jaona 10:11-18
Mbola mandia ity volana Aogositra ity isika mpianakavin’ny finoana ankehitriny ary ity no alahady faha 10 manaraka ny Trinite. Ity ihany koa no Alahady hiarantsika miombom-bavaka ka hahatsiarovantsika ny asa tanterahan’ny FJKM eo anivon’ny AUMONERIE NATIONALE . Ny Lohahevitra hoe : “MAHATOKY HATRAMIN’NY FAHAFATESANA NY MINO” hatrany, no mbola mbanjinintsika ankehitriny. Marihana etoana fa ity fanompoam-pivavahana ity dia azontsika arahina ao amin’ny pejin’ny facebook – ny Fitandremana FJKM Amparibe Famonjena. Ny fotoana androany dia notarihan’ny vaomieran’ny fifandraisana ka Ramatoa RAKOTOVAO Hanta, Diakona no nitarika ny fanompoam-pivavahana . Ny mpitandrina RAHARIJAONA SOLOFONIRINA kosa, no nitory ny tenin’Andriamanitra.
Ny litorjia , endriny faharoa no nentina nitondrana izao fanompoam-pivavahana izao. Taorian’ny fiarahabana Apostolika nataon’ny mpitarika dia ny tenin’ny Soratra Masina araka izay voalaza araka ny SALAMO faha 145 and. 1-3 no noraisina ho fiderana sy fisaorana an’Andriamanitra. : “ Hanandratra anao aho ry Andriamanitro Mpanjaka ô, sy hankalaza ny anaranao mandrakizay doria. Hankalaza anao isan’andro aho sy hidera ny anaranao mandrakizay doria. Lehibe Jehovah ka tokony hoderaina indrindra; ary tsy takatry ny saina ny fahalehibiazany” Amen!
Ny hira FF 45 “Hira fiderana ho Anao Ry Ray” no hira nentina nanombohana ny fotoana, ho fiderana an’Andriamanitra.
VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA
Toy izao no vavaka nentin’ny Fiangonana nidera an’Andriamanitra : “Ry Andriamanitra Rainay izay any an-danitra ô, miondrika eto anoloanao izahay, faly miombon’aina indray amin’izao anio izao. Ianao ilay nitondra anay namakivaky iny herinandro iny no hanandratanay ny fisaorana sy ny fiderana mitafotafo satria dia tonga amin’ny anio indray izahay Jehovah ô, tsy noho ny herinay na noho ny tanjakay fa noho ny famindram-ponao irery ihany. Afaka mifanatri-tava aminao amin’ny alalan’izao fotoam-pivavahana izao izahay noho ny fitiavanao ka dera sy laza no mipololotra avy ao am-ponay. Raiso Andriamanitra ô ny saotra sy dera atolotray anao ary aoka izahay hiasan’ny Fanahy Masina mba hitomboan’ny finoanay ka hahazoanay tokoa hahatoky hatramin’ny fahafatesana, mifikitra aminao Andriamanitra Rainay. Misaotra Tompo ô. Amen”
FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA - SEKOLY ALAHADY
Zoky Rova ZANAHARITSIMBA, Mpampianatra K6 no nanatanteraka ny fotoana ho an’ny Sekoly Alahady. Ny tenin’ny Soratra Masina noraisina ary natao ho tadidian’ny Fiangonana ho tsianjery dia ny Daniela 12 and. 3a : “Ary izay hendry dia hamirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra”
Nisy ny tantara kely nentin’ny tompon’anjara naneho izany tenin’ny Soratra Masina izany, izay tsy inona fa ny tantaran’i Daniela ihany . Izy dia olon-kendry , manam-panahy ary mahatoky an’Andriamanitra na dia fantany aza fa mety ahafaty azy izany. Noho ny fahatokian’i Daniela an’Andriamanitra dia novonjen’Andriamanitra izy na dia natsipy tao an-davaky ny liona aza. Izao ary no hafatra: Izay mahatoky ny Tompo dia hovonjena tahaka an’i Daniela ka tsy ahazo azy ny loza na dia ho faty aza.
Nisy ny vavaka notanterahina taorian’izany, nanehoana fisaorana an’Andriamanitra ; Izy , izay tsy mamela ho irery ny mpanompony na dia eo ambavahoana ny fahafatesana aza toa an’i Daniela. Ny Tompo anie hampitombo ny finoantsika mba aharitra amin’ny fahatokiana Azy isika , indrindra amin’izao fotoan-tsarotra lalovan’ny Fiangonana eto amin’ny firenena izao. Amin’ny anaran’i Jesoa Kristy Tompo no anaovana izao vavaka izao. Amen!
Mialoha ny fankalazana ny Tenin’Andriamanitra dia nohirain’ny Fiangonana ny hira FF 4 and. 3 “Ry Fanahy ô midina”
FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA.
Atoa RAZAFINDRAMAMBA Andry no nitari-bavaka mialoha ny famakiana ny tenin’Andriamanitra, ary Ratoa RAZAFINDRAMAMBA Cynthia no namaky manontolo ny perikopa izay voalahatra hovakiana eto amin’ny sahan’ny FJKM. Ireto no perikopa voalahatra :
Nehemia 3: 33-38
Jaona 10: 11-18
Apo 6: 9-11
Ny hira FFPM 632 and. 1 “Ampianaro aho Tompo mba hiambina” no nohiraina mialoha ny toriteny.
Ny mpitandrina RAHARIJAONA SOLOFONIRINA, no nitory ny tenin’Andriamanitra. Rehefa avy niarahaba ny Fiangonana izy ka nanolotra ny fahasoavana sy ny fiadanan’ny Tompo ho an’ny mpianakavin’ny Finoana , dia nandray ny filazantsara araka ny Jaona 10:11-18 mba hitondrana ny hafatry ny Tompo anio. Amin’ity perikopa ity dia In-telo miverina ny fanambaran’ny Tompo ny maha mpiandry tsara Azy . Hasongadiny mihitsy izany eo anoloan’ny ny hoe Mpiandry na Mpikarama, ny Mpangalatra sy ny Jiolahy , izay resahina ao anatin’ity perikopa ity. Hasongadiny ihany koa fa Izy no vavahady ary Izy no vavahadin’ondry. Hambarany ny fahatongavan’ilay irak’Andriamanitra ety an-tany, ny fahatanterahan’ny teny fikasan’Andriamanitra araka any Salamo faha 23 manao hoe : “Jehovah no mpiandry ahy”.
Ndeha ho raisina ho lohahevitra ny hoe : “JESOA NO MPIANDRY TSARA” ka zanakevitra roa no hodinihantsika ao anatin’izany:
1-	NY ATAON’NY MPIANDRY TSARA Teo amin’ny Jiosy dia fantatra tsara izany hoe mpiandry ondry izany. Diso fantatra loatra aza satria tantaram-piainan’i Davida izany. Izy ilay tandindon’ny Mesia izay ho avy. I Davida izay nanavotra ny Zanak’israely teo ambany vahoan’ny Filistina. I Davida ihany koa izay nandray ny fitondrana tamin’ny naha-mpanjaka azy ka nahatonga ny firenena manodidina ny firenen’i Israely ho teo ambany fanapahan’i Davida avokoa. Isan’ny heverina ho Mpanjakana nalaza i Davida ary noheverina fa ny fanjakan’i Davida dia endriky ny Fanjakana izay ho entin’ny Mesia rehefa tonga ilay fotoana ahatanterahan’izany. Ny fanehoana izany fahatanterahan’ny fiavian’ny Mesia izany indrindra ary no mahatonga ny fanambaran’ny Tompo fa Izy no Mpiandry tsara.
Fa inona tokoa moa no ataon’ny mpiandry tsara?
-NY MPIANDRY TSARA MANANGONA NY ONDRY ANY IVELANY
-MITADY IZAY VERY NA NANIA
-MIAMBINA TSARA NY ONDRY MBA HITOETRA TSARA AO AM-BALA.
Ny anton’ny fanambaran’i Jesoa dia maneho fa izany no ataon’ny mpiandry ondry rehefa azo antoka izy ary izany ihany tokoa no tokony atao, ary tanterahin’ny Tompo izany, ho fianarana ho an’ny Fiangonana.
Raha mpanara-dia ny Tompo izany ny Fiangonana dia ireo asa nataon’ny mpiandry tsara ireo no ataon’ny Fiangonana : Manangona ny ondry izay any ivelany ; mitady ny very sy izay mania ary miandry tsara ny ondry mba hitoetra tsara ao am-bala. Ireto no asa telo-loha izay tanterahin’ny Fiangonana : Ny “evangelisation” na ny tafika masina , mitady izay mbola any ivelany. Ny faharoa dia ny “edification” ho fitaizam-panahy ho an’ny olona efa nandray ny Tompo ary ny fahatelo dia ny fanatanterahana ny fitaizam-pinoana ho an’ny Fiangonana na ny “catéchèse”.
2-	NY TOETRAN’NY MPIANDRY TSARA Ny mpiandry tsara dia manolotra ny ainy hamonjy ny ondry. Tsy nataony ho zava-dehibe ny tenany fa izy dia manolotra ny ainy ho famonjena ny ondry. Ny Mpiandry tsara dia mahafantatra ny ondriny ary ny ondry dia mahafantatra ny mpiandry azy. Akain’ny ondriny ny mpiandry tsara. Mikarakara azy, mitrotro azy. Ny ondry izay andrasana dia mitoetra eo akainin’ny mpiandry azy mandrakariva; mahita ny fiarovan’ny mpiandry azy sy mahafantatra ny ataony.
Rehefa fantasika izany toetran’ny mpiandry tsara izany satria mpanara-dia ny Tompo isika fa hoy ny Tompo : “izay mino Ahy ny asa ataoko no ataony koa”, “ary anao asa lehibe noho izany asa izy” dia antoka lehibe omen’ny Tompo ho an’ny mino ny filazana ny amin’ny Mpiandry tsara; ny ataony sy ny toetra izay tokony ananana.
Mahatahiry ny finoana ve Ianao ? tanteraho ny maha-mpiandry tsara fa izany no ho fanehonao ny finoanao.
Mifankatia ve ianao ? taomy sy angony ny namana nivoaka ny vala ary tadiavo izay very Mazoto amin’ny fanompoana va ianao? Ataovy izay hanitarana ny ambahin-dain’ny fanjakan’Andriamanitra ka izay no hilazana fa Kristiana mahatoky hatramin’ny fahafatesana ianao dia ilay mpiandry tsara , mpanara-dia an’i Kristy. Ho an’Andriamanitra irery ny Voninahitra. Amen!
Taorian’ny toriteny dia nanolotra ny anjara hirany ny SAMPANA TANORA KRISTIANA
VAVAKA NOHO NY TENIN’ANDRIAMANITRA
Izao no vavaka notanterahina tamin’izany : “Ry Andriamanitra Mahefa ny zavatra rehetra ô, misaotra anao izahay raha mbola afaka nihaino indray ny hafatrao tamin’ny alalan’ny toriteny nentin’ny mpanomponao taminay. Mamy sy sarobidy tokoa aminay izany hafatrao izany, hotsakotsakoinay hamakivaky indray ny herinandro vaovao zay hodiavinay. Indrisy anefa Tompo ô fa raha nihaino izany hafatrao izany izahay dia torotoro ny fonay satria tsy nahefa ny anjara adidinay amin’ny maha-zanaka anay izahay. Tsy nanaraka ny tenin’ny mpiandry ondrinay izahay fa ny didohanay hatrany no nikirizanay ho tanterahina. Mifona Jesoa Tompo ô fa tsy mendrika anao ho mpiandry ondry tsara izahay. Mifona fa ondry mania, zaza mpanota, mpiray tsikombakomba amin’ny ratsy ary mpanamavo hatrany ny anaranao. Mamelà ny helokay Tompo ô fa diso teo anatrehanao izahay. Mamelà ny helokay noho ilay rà masina nalatsakao ho anay teo Kalvary. Mamelà ny helokay fa Tompo mpamindra fo sy mpiantra ianao. Misaotra Tompo ô. Amen!”
Ny fanekem-pinoana laharana faharoa na ny fanekem-pinoana Nikeana no nanehoan’ny Mpianakavin’ny Finoana ny Finoany eo anatrehan’Andriamanitra sy ny Fiangonana.
Izao no famintinana izany vavaka izany : “Isaoranay mandrakariva ny Anaranao ry Tompo Andriamanitray o! Fa mampianatra anay ny zavatra rehetra ianao, ary sitrakao izahay mba ho mahatoky hatramin’ny fahafatesana mandrakariva, satria ny mpanara-dia Anao dia mahatoky anao fa Ianao no mpiandry tsara. Amin’ny maha-mpiandry tsara Anao dia nampahafantarinao anay ny nataonao sy ny tokony ho tanterahinay .
Nampahalalanao anay ny toetra tokony ananan’ny mpiandry tsara ka anahaka Anao izay rehetra manara-dia Anao. Tompo o! , tinao izahay ho mpiandry tsara hanolotra ny ainay hamonjy ny ondry, mahafantatra tsara ny andraikiny sy ny ondry izay andrasana ary akainy ny ondry mandrakariva. Ataovy tanteraka aminay izany Tompo o! Ka hifantoka tsara amin’ny asam-panompoana, manangona ny ondrinao izay mbola any ivelany ka hazoto amin’ny fitoriana ny filazantsara. Hitady izay rehetra naniasia sy very mba hiverina hatrany ka tsy ahafoy Anao ka Hibebaka sy hifona ary hangata-panelana aminao . Hiambina azy ireny ho amin’ny fiambenana mendrika, ahatonga azy ho ondrinao ka ahatsiaro fa manana anao tokoa ao amin’ny fiainany. Fantatrao ny fanirinay sy hetahetanay ho fampandrosoana ny Fiangonanao, henoy vavaka izahay ka tanterao aminay ny teny fikasanao sy ny fampianarana nomenao mba ho arahinay.
Mivavaka ho an’ny Fitandremana FJKM Amparibe Famonjena izahay. Manana hetaheta sy faniriana ho kristiana mahatoky, ho mpiandry tsara eo aminao. Mivavaka ho an’ny FJKM manontolo, izay eo ankatoky ny faha 52 taonany. Mivavaka ho an’ny Aumonerie FJKM ihany koa, mijery ireo sahirana, kamboty sy ny olona any am-pigadrana. Mivavaka ho an’ny Raim-pianakaviana mitaraina amin’izay ho sahaniny amin’ny tokantranony. Eo ihany koa ny mpianatra sy ny mpanala fanadinana.
Tompo o! Miasà, mamalia vavaka. Mahatsiaro manokana ny mpitondra fanjakana mba hijery sy hitsimbona ny vahoaka. Mivavaka ho an’ny mpitandro filaminana mba hisian’ny fandriam-pahalemana sy hiaro ny vahoaka.Mahatsiaro am-bavaka ny mpikarakara ny fahasalamana sy ny fitsaboana.Mahatsiaro ireo manamanjo.
Hanome ny fitahiana sy ny famindrampo hitoetra aminay. Izany vavaka izany dia hatambatray amin’ny vavaka nampianarinao.” Amen
Rehefa izany dia nohiraina ny hira FFPM 452 : 2- 3 “Zaza ka tsy te-hifidy”
FAMARANANA NY FOTOANA
Nisy ny hafatry ny mpitandriny mba ahatonga ny Fiangonana hahatanteraka hitoetra mandrakariva ao anatin’ny vinan’ny Fiangonana. Manentana amin’ny fahazotoana mivavaka any an-tokantrano. Handray anjara amin’ny hetsika ataon’ny Fiangonana na ny any ivelany na ny ao anatiny.Eo ny antso ataon’ny foibe ho fanohanana ny asan’Andriamanitra. Eo ny fanatanterahana ny adidy eo anivon’ny Fiangonana.
Rehefa tanteraka izany dia natao ny famakiana ny Tondrozotra ary taorian’ny fanambarana izany no natolotra ny Tsodrano. Nofaranana tamin’ny fihirana ny hira FFPM 338 “Arovy aho, Tompo” Izao fanompoam-pivavahana izao ary natao ny vavaka mangina nofaranana tamin’ny trinité masina.
Nandray an-tsoratra : Rabako Tovohery
Nitendry ny feon-javamaneno: Rabiazamaholy Mahery
Nandrindra sy naka ny horonon-tsary sy ny sary : Rabemananoro Jonathan
Nikirakira ny feo: Randriamahefa Tinarivony